Hafatra – Amboaran-tonokalo nosoratan-dRasamy – Blaogin'i Voniary
Rediredy tokoa angamba ny an-dRasamy fa amin’izao fiainana efa sarotra izao ny olona no tadiaviny tsy ho kivy, hisikina herim-po sy hanana fikirizana . Rediredy angaha izany hanandratra ny teny Malagasy manoloana ny fiteny sadasada sy fiteny frantsay eto amintsika. Ary mbola toa hijanona rediredy fotsiny ihany ny fanakianana ireo zava-tsy mety eo amin’ny fiarahamonina, ny politika sy ireo mpitondra.
Ary raha ilazany momba ny “fitiavana” P27 sy ny fianakaviana toy ny “tsiaro an’I Papa” P12 sy “Soa fa teo I Neny” P15 koa ianao? Izany angamba hoy ianao mba zavatra mora raisina sy azo tsapain-tanana e! Ny olombelona sy ny “toetra miafina” P25, mety ho tsara mety ho ratsy, Izany angaha ka ahaliana! Fa tsy maintsy hivanitika ihany ianao hamaky ireo tononkalo mahatsikaiky “Hay sarimbavy” P25, “Kipipemty” P78.
Izao anefa, tsy anisan’ireny tononkalo misavoan-danitra ireny ny “Hafatra” P9 ampitainy fa trangan-javatra hita teny amin’ny fiarahamonina toy ny “mpanely tsaho” P61 sy “fesiboky fesiboky” P84. Tsy tononkalo natao hanofinofisana tontolo hafa fa rima entina hampisaintsaina amin’ny “fiainana mampirediredy” P69, “Jiramaty” P83 sy “Gasikara afobe” P 66.
Tononkalo mora raisina, tsy saro-takarina izay tiany ambara. Rasamy koa moa tsy tia miolankolana fa hitsiny avy hatrany ny momba ireo “mpitsabo tsy fidiny” P32, ”Ingahy minisitra” P 71 ary ireo “manam-pahefana” P 33 rehetra ka ilazany hoe “Olom-boafidy sa olom-boavidy?” P 86.
Fa raha ny ahy manokana, ankafiziko indrindra ireo tononkalo mivoy fijery miabo milaza fa “mikiriza hatrany” P40 satria ny “fiainana miovaova” P8 ka “tsy maintsy hamiratra indray ny maraina” P 17. Ahitana tononkalo maromaro azo isintonana teny manentana sy teny enti-miaina ao, azo atao famaky isa-maraina mba iatrehana ny tontolo andro.
Tsy rediredy velively raha fehezina no entin-dRasamy ao anatin’ity amboaran-tononkalo ity fa faniriana te-hanatsara, hitondra anjara biriky amin’ny fanasoavana ity tanindrazantsika ity. Tsy fitiavana ny hanakiana be fahatany fa finiavana te hanitsy ireo lesoka amin’izao vanim-potoana iainantsika izao.
Aimé Rasamison, Blog de Rasamy, famintinana hafatra rasamy, Hafatra Rasamy, Rediredin-drasamy, tara-kevitra hafatra rasamy, tononkalo rasamy